Chiono6: Inotengeka, Yakasarudzika, Yekushambadzira Yekushambadzira Yekugadzirisa Solution | Martech Zone
Kambani hombe yekutengesa email kuAustralia ikozvino iri kuwedzera kuUnited States, ichipa mhinduro inogadziriswa, yekushambadzira-bhizimusi kumakambani epamusika uye vamiririri nemutengo unodhura. Vision6 inosanganisirwa email kushambadzira otomatiki mhinduro yakavakirwa vatengesi uye vamiririri. Vision6 inosanganisa email automation, SMS, mafomu uye zvemagariro midhi mune iri nyore kushandisa interface.
Zviuru zvemazana edijitori anosanganisira Clemenger BBDO Australia, pamwe nezvikwata zvemukati zvekushambadzira kumakambani anosanganisira Audi Sydney, BMW Brisbane, Royal Society for Prevention of Cruelty of Animals (RSPCA) nemadhipatimendi mazhinji ehurumende, vanovimba neVision6 kunongedza vateereri vavo nemaemail epamusoro, akapatsanurwa akakonzerwa nezviito zvevatengi.
Email Kushambadzira ine yakakwira ROI yechero dhijitari yekushambadzira chiteshi, uye epamusoro kuita mabhizinesi ari kuda iri nyore, asi inokwanisika chikuva. Izvi zvakatungamira musika weUS kuva mumwe wevanokwikwidza zvakanyanya kune vanopa mhinduro mhinduro, kunyanya mumakore apfuura Isu tinodada kuunza imwe yeakajeka, mushandisi-centric mhinduro inowanikwa kumusika weUS. Mathew Myers, muvambi weChiratidzo6
Vision6 Kushanda Kwekushambadzira Zvimiro
Yepamberi Email Email - Turbo inobhadharisa yako inotungamira chizvarwa nekumisikidza email yekurera macampaign akagadzirirwa kushandura zvinotungamira mukubhadhara vatengi. Gadzira mafirifomu ekushambadzira emaemail akasarudzika
Dhonza uye Kudonha Mupepeti - Gadzira uye gadzira emaimeri anotarisa emaimeri nekungobaya chete, dhonza uye udonhedze. Iyo ndiyo yekushushikana-isina nzira yekugadzirisa matemplate.
Nhare Dzakanaka Matemplate - Sarudza hunyanzvi hwakagadzirirwa inoteerera HTML template inotaridzika zvakanaka pane zvese zvigadzirwa.
Dynamic Zvemukati - Natsiridza yako email mhinduro nekugadzirisa yako zvemukati zvemukati kushandisa yako data hunhu. Vision6's spreadsheet maonero anoita dhata chikamu chikamu nemhepo.
Email kuedzwa - Inofambiswa neLitmus, bvunzo uye utarise email yako mumabhokisi makumi mana makumi mana nemashanu uye zorora zviri nyore, uchiziva kuti ichataridzika kunge yakanaka.
Webhu Mafomu - Wedzera mafomu kuwebsite yako uye pasocial media uye tanga kuunganidza zvinotungamira. Gadzira zviri nyore mafomu ewebhu kuti aenzane neako maringi Vision6's mupepeti inoita kuti zvive nyore kuwedzera mifananidzo uye kugadzirisa mafomu kuti akwane zvaunoda.
Kubatanidzwa - Nyore gadzirisa mabasa kuburikidza nekubatanidza. Unganidza kushambadzira kwako neemail nemazana ekunyorera anosanganisira Google Analytics, WordPress uye Facebook.
Inopindirana Kuzivisa uye Dzvanya Mepu - Mifananidzo yekuona uye yakadzama inopa ruzivo rwakakosha mumaitiro evanyoreri vako. Tarisa mhedzisiro yako yeemail mhedzisiro iratidzike live uye uone kuti ndiani ari kuverenga maemail ako pane desktop kana nharembozha
Saina Saina Mahara neChiono6
Tags: dhonza uye udonhedze email mhaririemail zvine simba zvemukatiemail kuedzaFacebookgoogle analyticslitmusmarketing automationchiratidzo6WordPress
7 Matipi Ekuvaka Yakabudirira Kukura Yekushambadzira Mashini
AdPushup: Chengetedza uye Gadzirisa Yako Ad Marongero